Mourinho oo ka jawaab celiyay, hadal uu sheegay madaxweynihii hore ee kooxda Real Madrid – Gool FM
Mourinho oo ka jawaab celiyay, hadal uu sheegay madaxweynihii hore ee kooxda Real Madrid
Dajiye March 3, 2019
(Madrid) 03 Maarso 2019.Tababaraha reer Portugal ee Jose Mourinho oo ku gudi jiray falaqeynta kulnkii xalay ee El Clásico ee shabakada “BN Sport” ayaa si maldahan kaga hadlay mar wax laga weydiiyay inuu ku laabanayo shaqada tababarka ee kooxda Real Madrid.
Madaxweynihii hore ee kooxda Real Madrid Ramón Calderón ayaa xaqiijiyay in Jose Mourinho uu noqon doono macalinka soo socda ee Real Madrid, isla markaana ay labada dhinac u socdaan wada hadalo, laakiin Jose Mourinho ayaa ka bixiyay jawaab xiiso leh.
“Madaxweynihii hore ee kooxda, wuxuu sheegay magaceyga, waxaan qiimo weyn ka sameeyay horyaalka Spain, inuu sheego magaceyga waan ku faraxsanahay”.
“Ramón Calderón isagana wuxuu noqon doonaa madaxweynaha xiga ee kooxda waana hubaa taas”.
“Calderón wuxuu heystaa macluumaad ku saabsan kooxda iyo ciyaartoyda, in ka badan inta aan ka heysto, wuxuu ogyahay wax badan ee ku saabsan kooxda”.
“Waxaan dhihi karaa kani waa hadal ka soo baxa wargeysyada, dib ugu soo laabashadeyda shaqada tababarka kooxda Real Madrid, wali waxaan ahay da’ayar marka loo fiiriyo cel celiska da’ada maclimiinta kale, marka uu jiro rabitaan dabcan waad laabaneysaa”.
Tababare Solskjær oo ka hadlay guushii dirqiga ahayd ay ka gaareen kooxda Southampton
“Kulan kasta aan ku ciyaarno Santiago Bernabeu si fiican ayaan ugu raaxeysanaa” - Rakitic